Browsing: » Home »သတင်းများ»မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံတန် ရေနံ သန့်စင် စက်ရုံ စီမံကိန်းကို တရုတ် ကုမ္ပဏီက လုပ်ပိုင် ခွင့်ရ	Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံတန် ရေနံ သန့်စင် စက်ရုံ စီမံကိန်းကို တရုတ် ကုမ္ပဏီက လုပ်ပိုင် ခွင့်ရ	Posted by danyawadi on April 6, 2016 in သတင်းများ, General	ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် သမ္မတ အတည်ပြု	သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည် ၏ ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် →
Popular Posts	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	မြွေဟောက် ဘယ်လို အဆိပ်ထုတ် တိုက်ခိုက် သလဲ (ရုပ်သံ)	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	The History of ROHINGYA MUSLIMS of Arakan (Rakhine state) , Burma.	သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်	မြန်မာ - English အင်္ဂလိပ်- အဘိဓါန်	လိပ်ခေါင်းရောဂါနှင့် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးအမြင်	Recent Posts	မြွေဟောက် ဘယ်လို အဆိပ်ထုတ် တိုက်ခိုက် သလဲ (ရုပ်သံ)
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,915,905 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် April 2016